सचिव पद छाडेर पैसाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिरे – HostKhabar ::
सचिव पद छाडेर पैसाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको जागिरे
एक–दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्छ स् विमल कोइराला,पूर्वमुख्यसचिव
कृषिसचिव डा. युवकध्वज जिसीले संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) मा जागिर खान पदबाट राजीनामा बुझाएका छन् ।
सेवा अवधि झन्डै दुई वर्ष बाँकी छँदै उनले राष्ट्रसंघको जागिरका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजीनामा बुझाएका हुन् । उनले एफएओमा क्षेत्रीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न आवेदन दिएका थिए । एफएओले छनोट गरेपछि उनले विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीबाट राजीनामा दिएका हुन् । तर, सरकारले उनको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेको छैन ।
सचिवको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छँदै स्वास्थ्यसचिव डा। पुष्पा चौधरी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) मा जागिरे कर्मचारीका रूपमा आबद्ध भइन् । सरकारले राजीनामा स्वीकृत नगर्दै उनले डब्लुएचओमा जागिर सुरु गरिन् । यतिवेला चौधरी भारतको नयाँदिल्लीस्थित डब्लुएचओको ‘कन्ट्री अफिस’को पी–फाइभ ९सहसचिव तह०मा कार्यरत छिन् । त्यही जागिरका लागि उनले १३ कात्तिकमा सचिवबाट राजीनामा बुझाएकी थिइन् ।
तर, सुरुमा उनको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकृत गरेको थियो । आफ्नो राजीनामा अस्वीकृत गर्ने निर्णय पुनर्विचार गरिदिन निवेदन दिएर चौधरी पुनः सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् । सरकारसँगको सम्पर्कबाहिर पुगेकी उनले राजीनामा स्वीकृत नहुँदै डब्लुएचओमा काम थालिन् । चौधरीले डब्लुएचओमा जागिर खान थालेको तथ्य सार्वजनिक हुँदा दुई महिना बितिसकेको थियो । गत २७ पुसमा मात्र सरकारले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको थियो ।
मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएर एडिबीको वैकल्पिक निर्देशक
मुख्यसचिव छँदै डा. सोमलाल सुवेदी राजीनामा दिएर एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को जागिर खान फिलिपिन्स गएका थिए । एडिबीका लागि सरकारले नै उनलाई मनोनयन गरेको थियो । मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएर सुवेदी १ साउन ०७४ मा नेपालको तर्फबाट एडिबीको वैकल्पिक निर्देशक बनेर फिलिपिन्सको मनिला गएका थिए । मुख्यसचिवका लागि करिब एक वर्ष समय बाँकी छँदै सरकारले उनलाई एडिबीको वैकल्पिक निर्देशक पदका लागि मनोनयन गरेको थियो ।
एक वर्ष नपुग्दै ३१ जेठ ०७५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुवेदीलाई एडिबीबाट फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो । डा। सुधा शर्मा पनि बीचमै राजीनामा दिएर बाहिरिने विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी हुन् । उनले ०६८ पुसमा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । साढे दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै शर्मा स्वास्थ्यसचिवबाट राजीनामा दिएर युनिसेफको तान्जानियास्थित स्वास्थ्य तथा पोषण प्रमुखका रूपमा ‘पी–फाइभ’ तहमा काम गर्न गएकी थिइन् ।
एक–दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्छ : विमल कोइराला,पूर्वमुख्यसचिव
सरकारी सेवाको आकर्षक पद छाडेर कुनै संघ–संस्थामा जागिर खान जाने भन्ने विषयमा मूलतः दुईवटा पक्ष देखिन्छन् । एउटा, आर्थिक पक्ष हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा आकर्षक तलब र सेवा–सुविधा पाउने विषय जोडिन्छ । अर्को, व्यावसायिक विकासको पक्ष पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा काम गर्दा व्यावसायिक विकास हुने लालचले पनि उनीहरू त्यतातिर आकर्षित हुन्छन् ।
नेपालमा सरकारी सेवावधि सकिएपछिको भविष्य नदेखेपछि र उमेर बाँकी नै हुँदा उनीहरूले विकल्प खोजिरहेका हुन्छन् । यो विषयलाई व्यक्ति आफैँ र सरकारले पनि सोच्ने अवस्था आएको छ । विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति नै सरकारी सेवा छाडेर गएपछि यसले सरकारी सेवाको समग्र वातावरणमै असर गर्छ । यो नितान्त व्यक्तिगत विषय पनि हो, सँगसँगै सरकारले पनि सोच्ने विषय हो । सरकार आफैँले अघिल्लो दिन राजीनामा दिन लगाएर भोलिपल्ट संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरेको उदाहरण पनि छ । सरकारले गरेको चाहिँ नैतिक हुने, व्यक्तिले गरेको अनैतिक हुने भन्ने पनि हुँदैन । सेवानिवृत्त भएपछि एक–दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्यो भने पनि यसले थिति बसाउन मद्दत गर्छ । यसर्थ, यसका लागि एउटा प्रणाली नै बसाउनु जरुरी छ ।
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले बीचमै किन छाड्छन् जागिर ?
निजामती सेवामा सबैभन्दा ठूलो पद मुख्यसचिव हो । त्यसपछि सचिव हुन्छ । तर, विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी भएकै अवस्थामा जागिर छाडेर विदेशी संघ–संस्थामा काम गर्न जाने प्रवृत्ति बढेको छ । पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला सेवानिवृत्त भएपछि एक–दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न सके यस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने बताउँछन् । जागिरे समय सकिएपछि भविष्य नदेखेर जानेहरू पनि प्रशस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदी बहालवाला कर्मचारी बीचैमा छाडेर युएन, एजेन्सीलगायतमा जागिर खान जानु राम्रो नहुने बताउँछन् । ‘जिम्मेवारीमै रहेको कर्मचारी एकैपटक राजीनामा बुझाएर जाँदा त्यहाँ सरकारको गोपनीयता भंग हुने विषय आउँछ । देश र जनताको सेवाका लागि शपथ खाएको व्यक्ति बीचैमा छाडेर अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थामा जागिर खान जानु गैरजिम्मेवारीपन हो,’ सुवेदीले भने ।
समय छँदै राजीनामा दिएर जाने मुख्यसचिव तथा सचिवहरू
कर्णध्वज अधिकारी : मुख्यसचिव त्यागेर एडिबीमा जागिरे
तत्कालीन मुख्यसचिव कर्णध्वज अधिकारी नेपाल सरकारका मुख्यसचिव थिए । उनी पनि कार्यावधि बाँकी रहँदा मुख्यसचिवको जागिर छाडेर एसिया डेभलपमेन्ट बैंकमा सहसचिवस्तरको जागिर खान गए ।
नवराज भण्डारी : राजस्वसचिवबाट राजीनामा दिएर अमेरिकाको डिभी
नेपाल सरकारका राजस्वसचिव नवराज भण्डारीले २५ साउन ०७२ मा राजीनामा दिए । सचिवका रूपमा समयावधि कायमै रहँदा राजीनामा दिएर उनी निस्केका हुन् । सरकारले डिभी–पिआर भएका कर्मचारीले कि सेवा छाड्नुपर्ने कि डिभी–पिआर छाड्नुपर्ने गरी कानुन संशोधन गरेलगत्तै भण्डारीले राजस्वसचिवबाट राजीनामा दिएर अमेरिकाको डिभी रोजेका थिए ।
विष्णुप्रसाद धिताल : कृषिसचिव त्यागेर विश्व खाद्य कार्यक्रममा
कृषिसचिवको जिम्मेवारीमा रहेका विष्णुप्रसाद धिताल पनि सेवाअवधि बाँकी रहँदै जागिर छाडेर विश्व खाद्य संगठनमा काम गर्न पुगेका थिए । कृषि समूहका उनी मन्त्रालयमा खाद्य क्षेत्रको नेतृत्व गर्दै सचिव भएका थिए ।
भेषबहादुर थापा : अर्थसचिव छाडेर सिडामा
परराष्ट्रविद्का रूपमा चिनिएका भेषबहादुर थापा नेपाल सरकारको अर्थसचिव थिए । थापाले सचिव पदमा भन्दा क्यानडाको एउटा प्रोजेक्टमा आकर्षण देखे । उनी क्यानडाको सिडा भन्ने प्रोजेक्टको उपाध्यक्ष भएर गए । पछि उनी परराष्ट्र मन्त्री बनेका थिए ।
भरतबहादुर प्रधान : अर्थसचिवबाट राजीनामा दिएर विश्व बैंक
अर्थसचिव भएकै वेला भरतबहादुर प्रधान पनि राजीनामा दिएर हिँडेका थिए । उनले सरकारको अर्थसचिवको जागिरभन्दा विश्व बैंकको जागिर रोजे ।
रामविनोद भट्टराई : अर्थसचिवभन्दा एडिबी प्यारो
अर्थसचिवमै रहेका वेला रामविनोद भट्टराईले पनि सरकारले दिएको जिम्मेवारी बीचमै लत्याएका थिए । उनी अर्थसचिवको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर एसियाली विकास बैंकमा काम गर्न गएका हुन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट